Fragment Shop ကနေ နောက်ထပ် MLBB Starlight Skin ရမယ်လို့ သင်လောင်းရဲလဲ? | Codashop Blog MM
Home Games Fragment Shop...
Fragment Shop ကနေ နောက်ထပ် MLBB Starlight Skin ရမယ်လို့ သင်လောင်းရဲလဲ?
ရှားပါတဲ့ Skin Fragments တွေကို ဘယ်လို​ရှာဖွေရယူပြီး အဲ့ Skin တွေကိုဘယ်လို ၀ယ်ရမည်ဆိုတဲ့ အချက်များ
Mobile Legends က Starlight သီးသန့် Skin တွေက အလှအပမတွက်ပါဘဲ။ ဒါကို Starlight အသင်းဝင်ကြေးပေးသွင်းထားတဲ့ သူတိုင်း ရရှိနိုင်ပြီး ၎င်းတို့သည် Starlight Point များတိုးတက်မှုအပေါ် အခြေခံပြီး ကစားသမားတွေကို ဆုချဖို့ စီစဥ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အကြိုက်ဆုံး Hero ကို လစဉ် Features ထဲက လွတ်သွားရင် Rare Skin Fragment Shop ကနေရယူနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါကတော့ လက်ရှိ lineup မှာ featured ခံရမှ သာ၀ယ်ယူလို့ရမှာပါ။
ဒါတွေကတော့ Fragments Shop မှာ မတ် လ ၂၀၂၁ အထိ တွေ့ရတဲ့ အရင်က Starlight အသင်းဝင် Skin (Helcurt ရဲ့ Exoracial Executer) တွေဖြစ်ပါတယ်။
တနည်းကားဖြင့် အကယ်၍ သင်က ဒီအခွင့်အလမ်းကို မရခဲ့ရင်တော့ Fragment Shop ကို မှာ အမြန်ပြန်ရောင်းဖို့ ဆုတောင်းရုံဘဲ လုပ်နိုင်တော့မှာပါ။ Shop မှာက ကျပန်းစနစ်နဲ့ ရောင်းတာကြောင့် အမြဲတမ်းဆိုင်ထဲသွားသွားပြီး စစ်ကြည့်ဖို့တော့လိုပါတယ်။ Skin တစ်ခုချင်းစီအတွက် Fragment ပေါင်း ၆၀ ကနေ ၂၀၀ အထိရှိနိုင်ပါတယ်။ (Sabre’s Force Warrior ကတော့ ၁၅၀ အထိရှိတာက လွဲလို့) ။ နောက် Update မှာ ပြန်လာဖို့ မျှော်လင့်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရွေးချယ်ထားတဲ့ဟာတွေကတော့ အောက်မှာပြထားပါတယ်! သင်ကော ဘယ်သူတွေလာမယ်လို့ လောင်းမလဲ?
Skin တွေ ၀ယ်ဖို့ Rare Skin Fragments တွေလိုသေးလား? အောက်မှာပြောပြထားတဲ့နည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုပြီး သင်အလွယ်တကူ စုဆောင်းနိုင်ပါတယ် :
၁။ Magic Wheel ကို လှည့်ပါ (x10 ရနိုင်ပါတယ်) ။
၂။ Lucky Treasure Recharge မှ တဆင့်ရယူပါ။
၃။ Skin လက်ဆောင် (Skin Gift) များမှ တဆင့်ရယူပါ။
၄။ Starlight အခွင့်အရေး (Starlight Priviledge) ရဲ့ အစီအစဥ်ဖြစ်တဲ့ Rare Fragments ၅ ခုနဲ့ အခြား အခွင့်ထူးများ ရရှိရန်အတွက် Starlight အသင်း၀င်ပါ။ (တစ်လကို စုစုပေါင်း ၂၀-၂၅ ခု)
၅။ Starlight Shop ရှိ Starlight Magic Fragment ကိုသုံးပြီးလဲလှယ်ပါ။
(10 Magic Starlight Fragments = ၁ ရှားပါး Skin Fragement ၁ ခု နှင့် လစဉ် အများဆုံး ၅ ခု)
၆။ New Arrival (Skins / Heroes) မှ ရယူပါ ။ Shop> New Arrival သို့သွားပြီး Featured Skin/Hero နဲ့ Rare skin Fragments တွေကို ရယူပါ။ သင်ပါ၀င်ဖို့ New Arrival Tokens ဒါမှမဟုတ် Crystal of Aurora ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။
၇။ Event တွေမှာ ပါ၀င်ပြီး Rare Skin Fragments တွေကို ရရှိရန် Featured Hero ဒါမှမဟုတ် Skins ကိုအသုံးပြုပါ။
၈။ Lucky Spin လုပ်ပါ (အကယ်၍ သင့်မှာ ရှိပြီးသား Skin ကို ရှိပါက Rare Skin Fragments အခု ၂၀ နဲ့ လဲလှယ်ပေးပါလိမ့်မယ်) ။
၉။ Zodiac Summon Event မှာ ပါ၀င်ပါ။ Featured Hero ကို သုံးပြီး ကစားရုံနဲ့ ဆုအဖြစ် Rare Rare Skin Fragment တွေကို ရပါလိမ့်မယ်။
Mobile Legends Diamonds တွေကို Codashop မှာဘဲ ဖြည့်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။ အဆင်ပြေမြန်ဆန်တဲ့ ငွေဖြည့်စွက်မှုကို ရရှိနိုင်လို့ စိတ်သက်သက်သာသာ ဂိမ်းကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Previous articleသင်က ဘယ်လို PUBG ကစားသမား တစ်ယောက်လဲ?
Next articleMobile Legends Yve လမ်းညွှန် : အကောင်းဆုံး Build နှင့် Zhask ရဲ့ သေလောက်တဲ့ရန်သူကို counter နည်း